Ofundisa ukushayela ubanjwe 'ebuhlabile' eya kwesokuhlolela ukushayela | News24
Ofundisa ukushayela ubanjwe 'ebuhlabile' eya kwesokuhlolela ukushayela
Cape Town – Owesilisa ofundisa abantu ukushayela uboshiwe ngemuva kokutholakala notshwala egazini obuphindaphindeke ka-12 okunalokho okuvumelekile emgwaqeni u-N2 eCape Town ngoLwesine ekuseni, kusho iziphathimandla zedolobha.
Ubonakale emotweni yokufundisa ukushayela phakathi kwemigwaqo uBhunga Avenue kanye noJan Smuts Drive ngabo-07:15, ngokusho kwelungu lekomiti leMeya elibhekele ezokuphepha kanye nokuhlaliswa komphakathi, uJP Smith.
OLUNYE UDABA: Bahleli lubhojozi yizilwane zomfowabo
“Umshayeli unqabile ukuthi ame kanti iphoyisa libe selimphoqa ukuthi ame. Ngesikhathi kuhlolwa utshwala, umshayeli uqale wahluleka ukufutha kwi-breathalyser, futhi ngesikhathi ekwenza ekugcineni, umbhalo ubuwu-1.34 mg per 100ml nokungaphezululu ngezikhawu ezingu-12 esikalweni esivumelekile.”
Lo wesilisa ubesendleleni elibangise esikhungweni sokuhlolela ukushayela eGallows Hill, nokuyilapho bekuzohlolwa khona ikilayenti lakhe. Okunalokho, ugcine eseboshwa wayiswa esiteshini samaphoyisa e-Athlone.